0यो जंगल साहसिक महसुस र तपाईं यहाँ र त्यहाँ बाट जनावर जस्तै कूद छन् भने महसुस गर्न चाहनुहुन्छ? यो धेरै भयानक र सुपर मजा खेल आफ्नो हात प्रयास- जंगल Jackpots खाका गेमिङ विकास. तपाईंले धेरै प्रशंसा पूरा रूपमा आफ्नो बाल्यकाल दिन फिर्ता आएको र उमेर देखि कार्टून क्लिप लागि yearned गरिनेछ- Rudyard Kipling गरेर जंगल बुक मा आधारित Mowgli को रोमांचक.
खाका गेमिङ बेलायत आधारित डेभलपर र जर्मनीको Gauselmann समूह को एक भाग हो. खाका को रणनीति टोली तिनीहरूले जंगल Jackpots लागि गरेका जस्तै एक परिचित विषय आधारित स्लट खेल परिचय प्रयास छ. यो तत्काल खेलाडी खेल्न एक कसैमा दिन्छ. यो पनि बजार अद्वितीय मार्केटिङ अवसर दिइरहेका. खाका गेमिङ धेरै यस्ता रोमाञ्चकारी खेल सिर्जना गरेका, वैश्विक क्यासिनो बजार लागि दुवै अफलाइन र अनलाइन स्लट.
यो5रील सेट पुस्तक को फ्लिकरिङ पृष्ठ माथि जंगल वातावरण निर्माण भएको छ कि पुरस्कार Jackpots, सही नाम दिने- जंगल Jackpots. यो संग 20 paylines.
प्रत्येक खेल चरित्र प्लेयर उपहार केही वा अन्य छ. उदाहरण को रुपमा, तपाईं आफ्नो रील को बीचमा मा हात्ती STOMPING पाउन भने, सम्म4रील तत्काल जंगली बदलिनेछन्. साथै, तपाईं रील माथि चढाई को बाँदर फेला यदि, तिनीहरूले स्ट्याक्ड जंगली प्रतीक प्रकट गर्न तिनीहरूलाई पुल गर्न सक्छन्. को Kaa वा खेल को जंगली द्वारा प्रस्तावित एउटा रोमाञ्चक बोनस सुविधा पनि छ. जब यो आफ्नो ठाउँमा लक, यो खेलाडी छनौट गर्न एक विकल्प दिन्छ3बास्केट, प्रत्येक बोनस एक फरक प्रकारको एक मुक्त स्पिन वा स्लट देखा अतिरिक्त wilds या त हुन सक्छ जो yielding. एक बास्केट पनि खेल समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ को.
यो सट्टेबाजी दायरा £ 0.20 देखि सुरु र प्रति स्पिन £ 500 सम्म जान्छ. प्रयोग प्रतीक मुख्य रूप खेल लोगो छन्, अतिउष्ण torches साथ, फल कटोरे, र जंगली पैताला छाप्.
प्रस्तावित अन्य बोनस बीच Baloo गरेको रहस्य पुरस्कार र Bagheera गरेको हट लकीर हो. तपाईं पनि गर्न को नगद पुरस्कार जित्न सक्छौं 1000 पटक Mowgli मार्फत आफ्नो शर्त रकम जो स्याउको रूख मा झूल राख्छ, र स्याउ को कुनै पनि अनियमित यो नगद पुरस्कार प्रकट. तपाईं यो पुरस्कार संग पनि सन्तुष्ट छैनन् भने खम्बा यो नगद पुरस्कार राख्न सक्छ. तर, यो पनि आफ्नो पहिले नै कमाएका पुरस्कार पैसा गुमाउने नेतृत्व सक्छ.
जंगल Jackpots आफ्नो सबै खेल तिर्खा मेट्न गर्ने अधिकार स्टप छ. लगभग आफ्नो डिजाइन टीम लगातार क्यासिनो संचालक लागि लाभदायी छन् कि यस्तो स्लट सिर्जना मा रचनात्मक सीमाहरु धक्का प्रयास छ रूपमा खाका गेमिङ गरेर सबै खेल धेरै accolades जित्यो छन्, र एकै समयमा खेलाडी लागि Entertaining छन्. र तिनीहरूले जंगल Jackpots संग एक शानदार काम गरेको छ.
ठूलो जीत चाहनुहुन्छ? Download Our Blackjack Strategy…